8 catering companies in Shijiazhuang join battle against epidemic (1/8)
2020-02-17 10:38:28 Xinhua Editor :Yao Lan
Staff of a catering company prepare meals for frontline medical workers in Shijiazhuang, capital of north China's Hebei Province, Feb. 16, 2020. Eight catering companies in Shijiazhuang provide free meals for frontline medical workers and their family amid the battle against the novel coronavirus outbreak. (Photo by Xu Jianyuan/Xinhua)
A chef of a catering company has his body temperature checked before his shift in Shijiazhuang, capital of north China's Hebei Province, Feb. 16, 2020. Eight catering companies in Shijiazhuang provide free meals for frontline medical workers and their family amid the battle against the novel coronavirus outbreak. (Photo by Liang Zidong/Xinhua)
Staff of a catering company prepare meals for frontline medical workers in Shijiazhuang, capital of north China's Hebei Province, Feb. 16, 2020. Eight catering companies in Shijiazhuang provide free meals for frontline medical workers and their family amid the battle against the novel coronavirus outbreak. (Photo by Liang Zidong/Xinhua)
Staff of a catering company transport meals for frontline medical workers in Shijiazhuang, capital of north China's Hebei Province, Feb. 16, 2020. Eight catering companies in Shijiazhuang provide free meals for frontline medical workers and their family amid the battle against the novel coronavirus outbreak. (Photo by Liang Zidong/Xinhua)
Staff of a catering company distribute meals for medical workers at a hospital in Shijiazhuang, capital of north China's Hebei Province, Feb. 16, 2020. Eight catering companies in Shijiazhuang provide free meals for frontline medical workers and their family amid the battle against the novel coronavirus outbreak. (Photo by Liang Zidong/Xinhua)